Warqad Furan oo ku socota @ Jack oo ku saabsan Twitter | Martech Zone
Warqad Furan oo ku socota @ Jack oo ku saabsan Twitter
Jimco, Febraayo 10, 2017 Axad, Febraayo 12, 2017 Douglas Karr
Muddo sanad ah hada, waxaan ku kaftamay in Twitterku yahay sidii gabadhii aan iskuulka ku jeclaa ee aan waqtiga maalinta i siin doonin. Hal mar ayaan ku ciyaarnay dhalada hoose ee guriga, waxayna ku shubtay dhalada si ay u dhunkato ninka aniga agtiisa ah taas oo ah jerk. Qalbiga ayay iga jabisay. Isagana ugu dambayntii wuu jabiyay midkeedii. Labadeenaba waan khasaarnay. Twitter ayaa luminaya, sidoo kale.
Waxaad ku qortay dakhligaaga soo wac:
Waxaan ku faraxsanahay inaan soo sheegno in isticmaalka firfircoon ee maalinlaha ah la dedejiyay rubuc 3aad oo isku xigta, waxaanan aragnaa in koritaanka xooggan uu sii socdo.
Ma hubo cidda We waa, laakiin markii aan maqlay ereyga isticmaalka firfircoon ee maalinlaha ah waa la dedejiyey, Ilmadii baan daadiyay. Waad dhunkataa shaydaanka. Waana nuugtaa maxaa yeelay waxaan ahaa kii ku jeclaa.
Maalin ma aadaysid adigoon maqal Twitter.
In kasta oo ay taasi run tahay, aan daacad isu noqonno. Taasi waa asal ahaan sababtoo ah ereyga tweeted ayaa laga hormaray magaca Donald Trump muddo sannad ka badan.
Ninkaas oo aanad wax badan ka fiirsan ayaa run ahaantii ah sababta kaliya ee dadka intiisa badani ka maqleen Twitter-ka sanadkii la soo dhaafay oo dhan. Waxayna u muuqataa inay sii socon doonto sanadkan. Way adag tahay hadiyadda u keeni doonta Twitter sharafteeda hore.
Ma ahi Hack
Waxaan ka shaqeynayey warshadaha internetka tan iyo markii la aasaasay iyo suuqgeynta dhaqameed ee taas ka hor. Waxaan daawaday sida Wargeysyadu isu dilaan, anigoo iska indhatiraya tayada suxufinimo ee aqristayaashu ku qaddarin jireen ugana ganacsan jireen indhaha iyo kuubannada. Waxay jeclaadeen jerk.
Waxaan sameeyay baaritaanno taxaddar leh waxaanan siiyay la-tashiyo SaaS ah oo ka badan $ 3 bilyan oo maalgashi iyo soo iibsi. Waxaan saadaaliyay (sida kuwa kale oo badan sameeyeen) baaba'a dhinaca cawl ee warshadaha raadinta. Waxaan ahaa qayb hore oo ka mid ah koritaanka shirkadda ExactTarget waxaanan gacan ka gaystay sidii loo bilaabi lahaa shirkad kale oo loo iibiyo Oracle. Waxaan wax ka qoraa Teknolojiyada Suuqgeynta maalin kasta. Waan wareegayaa.
Waana jeclahay Twitter Twitter inkasta oo ay i dhagaysan weydo.
Sidee Ayaan Aaminsanahay in Twitter ay Si Deg Deg Ah U Rogi Karto… Si Deg Deg Ah
Aan si toos ah ugu boodno barta. Waan ku jahwareeray barta Twitter sababtoo ah waxaan u maleynayaa in dhibaatadu ay aad uga dhib yartahay sida aad u sameysay. Iyo sababta oo ah waxaan aaminsanahay inaad jacayl ku qabatay tirooyinka sii kordhaya - jerk-ka taas oo horseedaysa is-dilid adiga kuu gaar ah.
Khibradda Twitter-ka waxay ahaan jirtay daahfurka cajiibka ah ee qof cajiib ah, summad, ama xitaa hanad ku xardhan 140 xaraf. Khibraddu hadda waxay la mid tahay isku dayga wadahadal ee godka mooshka ugu weyn meeraha. (Waxaan marwalba doonayay inaan ku isticmaalo erayga mosh pit maqaal).
Sawaxanka ka socda Twitter-ka ayaa ah mid aan kala go 'lahayn oo waad u dabaaldegeysaa kororka ku yimid isticmaalka firfircoon.
Waa tan waxa aan isla markiiba kugula talin lahaa:
Xayira Tweets ku celcelinta. Jooji waalida. Xisaabteyda Twitter-ka, looma oggolaan karo inaan ku celiyo isla tweet-ka muddo cayiman haddii aan bixinayo si aan u dhiirrigeliyo Tweet. Maxaan lacag kuugu siinayaa markaan dhawaaqo echo maalinba maalinta ka dambaysa? Tilmaam: Anigu ku siin maayo.
Kusoo oogo API isticmaalka halkii tweet la daabacay. Maaha inay badnaato… laakiin ka madbacad ahaan, waxaan si farxad leh u bixin lahaa bil-bil ah halkaan si toos ah ugu soo diri karo digniinta ku saabsan qoraalladayda si kuwa raacsan ay uga jawaabaan. Spammers ma yeeli doonaan. Way bixi doonaan.
Kharashka isticmaalka #ad halkii tweet la daabacay. Malaayiin doolar ayaa maraya barxadaada maalin kasta oo aadan lacag kaheleynin. Xaqiiqdii, asxaabteydu way igu nici doonaan markaan soo jeediyo tan, laakiin waxaan isku dayayaa inaan ku caawiyo - maahan iyaga. Waxay yareyn doontaa codsiyada, waxaanan marwalba xakameyn karnaa ama laadan karnaa khayaanada ka codsada anaga oo aan calaamadin.
Add Feejignaanta Farriimaha Tooska ah. Ma awoodo mana baari karo DM-yadeyda maadaama ay koontaroolka ka baxeen. Wax fikrad ah kama haysto meesha aan xitaa ka bilaabayo laakiin waxaan jeclaan lahaa fursadda aan ugu oggolaado dadka isticmaala qaarkood inay si qarsoodi iila hadlaan. Waqtigan xaadirka ah waxay ku dhex jiraan kumanaan fariimo kale waana diidey inaan hubiyo.
Jooji inaad ii soo dirto emayllada aan raaco Pop Culture Xisaabaadka Twitter-ka oo gebi ahaanba aan aniga khusayn. Haddii aad i dhageysatay (tusaale ahaan daawaday cidda aan la falgalay), waxaad ogaan laheyd in Kanye West iyo Justin Bieber ay yihiin dad aan si xiisa leh u xiiseynayo. In kasta oo aad u maleyneyso naftaada inaad tahay TMZ bulsho, maahan sababta aan kuu adeegsanayo… maahan sida malaayiin kale ay kuu isticmaalaan.
Kala saar Sumadaha Dadka. Ma aha in faraq badani badnaado, laakiin waxay noqon laheyd wax cajiib ah haddii aan sheegi karo farqiga. Waan kala shaandheyn karayey oo kala qaybin karaa quudintayda inta udhaxeysa wadahadalka shaqsiyadeed iyo kan xirfadeed.
Qabso noqoshada a Kanaalka Adeegga Macaamiisha. Malaayiin cabashooyin iyo dib u eegis ah ayaa mara meshaada maalin kasta waxayna u guuraan shirkadaha iibsada qalabka kormeerka warbaahinta bulshada si ay u qabtaan. Maxaad u bixin la’dahay qalabkan? Maxay Twitter uga dhigi la’dahay rooga barnaamijyada dhinac saddexaad oo aad adigu sameysid? Waxaan jeclaan lahaa dib u eegis bot ee boggeyga oo igu calaamadeyn lahaa kuna daabaci lahaa Twitter-ka si adduunyadu u aragto. Waxaan jeclaan lahaa inaan arko adiga oo si toos ah u bixinaya dareenka iyo dib u eegista iyada oo qayb ka ah astaanta astaanta.
Fadlan hagaaji taada raadinta gudaha iyo autocomplete saxsanaanta. Taasi waa inaan isticmaalaa goobta: twitter.com raadinta Google si dadka looga helo Twitter waa wax lagu qoslo.
Halkaas ayaad ku haysataa, Jack. Waxaan si kal iyo laab ah u rajaynayaa in Twitterku uusan ku dhegganayn jarkaas ay ku sii shumiso xafladaha. Laad jabinta adeegsiga oo soo dhowee ka qaybgalka. Jacaylka dhabta ah ee Twitter ayaa halkan fadhiya oo sugaya.
Psst… I soo wac. 😉
Tags: Donald Trumpjackjaar dortebuunkatrump on twitterTweetTwitter
Google Search Console Goofed Oo Loogu Diray Digniin Been ah WordPress